Feb7– Mandalay International Science Academy
February 7, 2021 Wai Yan
We would like to inform you that MISA will strive to continue to teach our students as best we can during this time.
Teachers have been asked to continue their lessons and will be present in their classrooms as far as Internet connection allows it. We ask students to be present too, and to continue learning.
Teachers have also been asked to prepare learning materials in case of longer Internet blackouts, so that students can revise and study offline. These will be compiled and distributed to respective grade levels.
It is important that we keep our children active, engaged and occupied, especially at this time, in order to provide as much normality as we possibly can
We would also like to make it known how proud we are of MISA parents for continuing to adapt and cope during such difficult times.
MISA အနေဖြင့် ယခုလိုအချိန်မျိုး တွင်လည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်လက်၍ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
အင်တာနက်လိုင်း ဆက်သွယ်ရရှိနေပါက စာသင်အတန်းများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်သင်ကြားပေးရန် ဆရာ၊ ဆရာမများအား အကြောင်းကြား အသိပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုလည်း အတန်းများကို ပုံမှန်အတိုင်း တက်ရောက်သင်ကြားကြရန် မှာကြားလိုပါသည်။
အကယ်၍ အင်တာနက်လိုင်း အချိန်ကြာကြာ ပြတ်တောက်ခဲ့ပါက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အင်တာနက် မပါရှိဘဲ သင်ခန်းစာများကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် သင်ကြားရေး လမ်းညွှန်ချက်များ သင်ထောက်ကူ စာစဉ်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန် ဆရာဆရာမများအား အကြောင်းကြားထာပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသင်ခန်းစာများကို သက်ဆိုင်ရာအတန်းအလိုက် တစုတစည်းတည်း ဝေပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလိုအချိန်တွင်လည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ တက်တက်ကြွကြွဖြင့် စိတ်ဝင်တစား ဆက်လက် ပညာသင်ယူနိုင်မှု ရှိနေစေရန်၊ မူလအတိုင်း ပုံမှန် ဆက် ရှိနေကြစေရန် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပူးပေါင်း ထိန်းပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
ယခုလိုခက်ခဲလှသည့် အခြေအနေတွင်လည်း အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ပုံပိုးပေးကြသည့် MISA မိဘများအတွက် များစွာဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ကြစေလိုပါသည်။